PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: မြန်မာ့ကျောက်စိမ်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထိုင်း ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ်တ...
ပုံပါကျင်တိုက်ပွဲအတွက် RCSS/SSA အား တပ်မတော်မှ တော...
တအာင်းအမျိုးသားတပ်မတော်(TNLA) နှင့် အစိုးရတပ် တိုက...
KIA မှ မန္တလေး-မူဆယ် ကုန်သွယ်ရေး လမ်းမကြီးကို ညပိုင...
လူပင်လယ်ကြီးကြားမှာ တွေ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းေ...
ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်မြို့ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
အလုပ်သမား အခွင့် အရေး ဆောင်ရွက်မည် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း...
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး (၉)နှစ်ပြ...
ဘန်ကောက်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
တရုတ်စီးပွားရေးသမား သံမဏီ စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ အား...
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြရင်း လဲကျသူ ၁၀ ဦးအထိရှိလာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည် ၂၄ နှစ်တွင်း ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ...
ရိုဟင်ဂျာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန...
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းနှင့် သမ္မတအကြံေ...
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ထိုးစစ်ဆင်...
အစိုးရသတင်းစာ စွတ်စွဲချက်အား ကေအိုင်အေ ဒုစစ်ဦးစီး...
ဘယ်သူမှတော့ နေပူထဲမှာ အငတ်မခံချင်ဘူး
ပြည်သူကို စော်ကားခဲ့တဲ့ သမတအကြံပေးအဖွဲ့ ထဲက နိုင်င...
ပြည်သူတွေကိုတော့ လျှပ်စစ်ခြွေတာသုံးဖို့ ညွှန်ကြားနေ...
အင်အားသုံး ဖြေရှင်းမှု ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ မကျေနပ်
ဘေးသင်.နေသော မြန်မာနိုင်ငံ နှင်. ထိပ်တန်း ခြစား မှုတွေ
မြန်မာ အစိုးရစစ်တပ်မှKIA ဘက်သို့ လက်နက်ကြီးများဖြင...
SSA နှင့် အစိုးရတပ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူပြီး ၅ရက်အကြ...
မြန်မာစစ်တပ် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်နေဟု AI ထုတ်ပြန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်
အသက် ၂ဝ အောက် အမျိုးသမီးများ ဆေးသောက်၍ ကိုယ်ဝန်ဖျက...
လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေရန် ရန်ကုန်မြို့ခံများ ဒုတိယနေ့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်မီးအကြော...
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်...
Atrocities In Kachin Land အစိုးရ၏လူ့အခွင့်အရေးချို...
ယူနန်-မြန်မာ ရေကာတာ ပြဿနာ
NLD အောက်ခြေ အနေနဲ့ တပ်မတော်ကို စည်းရုံးစေချင်
လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ရရှိရေးအတွက် ဆူးလေ ဆုတောင်းပွဲ
ILO ညီလာခံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောမည်
မန္တလေးက ၂၄ နာရီ မီးရရှိရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြ...
ဆူးလေတွင် ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ဆန္ဒပြ
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် တိုင်းရင်းသား ညီအကိုများ အားလုံး...
၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ တေ...
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တစ်ခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထပ်မံရရှိ
လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး ဆန္ဒပြသူများ အဖမ်းခံရ
အမှတ် (၈) ရဲတပ်ရင်း ရဲတပ်သား ၇ဝ လောက်က ရပ်ကွက် လူထ...
မုံရွာမှာလဲ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန် ရရှိရေး တောင်းဆိုမ...
၂၁-၀၅-၂၀၁၂။ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ရရေး မန္တလေး လှုပ်ရှာ...
အန္တရယ်ကြားက ရင်နစ်ဘွယ်ရာရေမဆေးကျောက် ရှာနေရသော ရွှေ...
လှိုင်သာယာက ဆန္ဒပြနေတဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကို ကိုမင်...
အင်တာနက်ကြောင့် ဘ၀ပျက်ရတဲ့ မုံရွှာမြို့က မိန်းကလေး
အပစ်ရပ်ပီးနောက် ပထအဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ ရှမ်းတော်လှ...
မန္တလေးမြို့မှာ လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ရရှိရေး​ ဖယောင်း...
မြန်မာ စစ်တပ်မှ “ဇီးကထောင်”ရွာအားမီးရှို့ဖျက်ဆီး
လူ ၈ ယောက်ရဲ့ အသက်ကယ်ခဲ့တဲ့ အလှူရှင်မလေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ် ၀န်ကြီးဘယ်မှာရှိနေသလဲ...
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အ၀ ရရှိရေးအတွက် မန္တလေးမြို့သ...
အနည်း ဆုံး ၀န်ကြီး လေးပါး အနားပေး ခံရမည်
Facebook ဖန်တီးသူရဲ့ မင်္ဂလာ သတင်း
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချ...
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ရဟတ်ယာဉ် ရပ်ရန် အသုံးပြုခံခဲ့ရသည...
နေ့စဉ်အင်အား ပြုန်းတီးနေသော မြန်မာ့တပ်မတော်
ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက...
မနန်းဝိုးဖန်၏ ဂျပန်နိုင်ငံသား ခင်ပွန်းကို စသုံးလုံ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိသျှပါလီမန်တွင် မိန့်ခွန်းေ...
ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ နဲ့ အစိုးရ အြ...
ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဒုသမ္မတအနားယူသည့်ကိစ္စ အစိုးရကြေ...
ဒဏ်ခတ်မှုဆိုင်းငံ့တာ ဆီနိတ်တာတွေ ကြိုဆို
Facebook ရှယ်ယာများ ၀ယ်နိုင်ပါပြီ
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအတွင်း ကချင်အမျိုးသမီးများ လိင်ပ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ထိပ်တိုက်နိုင်ငံရေး အားပြိုင်ပွဲ တစေ့...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံဘ...
တပ်ရင်းမှူးလက်ထဲက မန္တလေးတောင် အလှူခံပုံး
စစ်ရေးပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး...
ဇေကမ္ဘာ မြေသိမ်းမှု ပဋိပက္ခ (ရုပ်/သံ)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
ကဲစစ်အာဏာရှင် အဓမ္မ၀ါဒီ တဦးကတော့ - အမြင်မှန် ရပြီး...
ဧရာဝတီတိုင်း ကျုံပျော်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှားခဲအင်...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီမှ လယ်ယာမြေများအား...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း အင်တာဗျုး (ရုပ်သံ)
၂၀၁၂ ခုနှစ်ရဲ့ Miss Myanmar International ပွဲ
ခွင့်သာခိုက်မှာ ဂွင်မရိုက်စေချင်ပါ.. (ပေးစာ)
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ဖော်ဆောင်ေ​ရး လုပ်ငန်းစဉ်...
ပိတ်လှောင် ခိုင်းစေခံရသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၅၀ ခန်...
အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ ဒုက္ခသည် ရေရှည် နေထိုင်ခွင့် ဗီဇ...
အူယားဖားယား၊ ဖုတ်ပူမီးတိုက်၊ အပြေးအလွှား ?????
"အပျိုရည် အဖျက်ခံရတဲ့ မန္တလေးနဲ့ ဂန္ဓရာဇ်မျော့ဖြူကြီ...
‎"ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်တွင် တနည်းနည်းဖြင့် ဆက်စပ်နေသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၊ ၎င်း၏ မိသားစုဝင် များ၊ ကုမ္ပဏီများသည် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရန် အခွန်ငွေများ၊ လုပ်ကွက်ကြေးများကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျက်ရှိ"
စစ်တပ်၏ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီက ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်အားလုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ချယ်လှယ်ခဲ့သည်။ တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များသည် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ မှ တဆင့် လုပ်ကွက်ဝယ်ယူနေကြရသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ခန့်မှ စတင်၍ တပ်မတော်အစိုးရသည် အကျိုးတူကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်များကို သတ်မှတ်ပေးကာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၊ ၎င်း၏မိသားစုဝင်များနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းကာ ကျောက်စိမ်းကို အထိန်း အကွပ်မရှိ ပရမ်းပတာတူးဖေါ်ခဲ့ကြသည်။
စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် နေ့၊ ည မရပ်မနားတူးဖေါ်မှုကြောင့် အချိန်တိုကာလအတွင်း ဖါးကန့်ဒေသ သည် မူလနယ်မြေအနေအထားများ လုံးဝပျက်စီးနေရသည်။ မြေဇာကို စနစ်တကျသွန်ချမှု မရှိသော ကြောင့် နှစ်စဉ်
ဥရုချောင်း ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ကာ ဒေသခံလူထုများ ရေဘေးအန္တရာယ်ကို အမြဲရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဖါးကန့်မှထွက်ရှိသော ကျောက်စိမ်းအားလုံးသည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသွားကာ ဒေသလုပ်ငန်းရှင် များမှ မဆိုစလောက်သာ အကျိုးခံစားခွင့် ရနေကြသည်။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာပိုင် ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမူ ကျောက်စိမ်းမြင်တွေ့ရန် မလိုဘဲ တရုတ်လောပန်းများ၏ ငွေကြေးစွန့်ကြဲမှုကြောင့် စည်းစိမ်အပြည့်ခံစား၊ ချမ်းသာနေကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှ အရင်းအနှီးမရှိသူများသည် ရေမဆေး ကောက်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီများတွင် လခစားဝန်ထမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နေ့စဉ် စားရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရသည်မှာ ဦးရေ သိန်းဂဏာန်း ရှိသည်။
ဤကဲ့သို့ ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်မှုကို ရပ်တန့်ရခြင်းမှာ လွန်ခဲ့သည့်လအတွင်း သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန အတွင်း ငွေကျပ်သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ငွေအလွှဲသုံးစားမှုဖြစ်ပေါ်နေသည် ဟူသော သတင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိမည်ဟု ကျောက်လုပ်ငန်းရှင်များ ပြောဆိုနေကြသည်။
ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်တွင် တနည်းနည်းဖြင့် ဆက်စပ်နေသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၊ ၎င်း၏ မိသားစုဝင် များ၊ ကုမ္ပဏီများသည် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရန် အခွန်ငွေများ၊ လုပ်ကွက်ကြေးများကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျက်ရှိသည်။ လုပ်ကွက်ကြေးကို အပြည့်မပေးဆောင်ဘဲ သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများကို ရွှေတုံး၊ ငွေ၊ ခြံမြေများ၊ အခြားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရှယ်ယာခွဲဝေ ပေးခြင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်ပေးနေရကြောင်း သိရှိသည်။
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသည် အစိုးရအသစ်လက်ထက်တွင် ငွေကြေးအလွှဲသုံးစားမှုရှိသည်ဟု ပထမဦးဆုံး နာမည်ဆိုးပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်၊ ၎င်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်အဖတ်ဆယ်ရန် ယခုကဲ့သို့ ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းကို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုနေကြ သည်။